DiRT 4: Totenda Feral Inopindirana chiteshi cheLinux chabuda nhasi | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi ndiro zuva iro Linux chiteshi che DiRT 4 mutambo wevhidhiyo. Zvese zvekutenda mukuvandudzwa kweFeral Interactive, sezvazvinowanzoitika mukambani iyi iri kuunza akawanda akakosha emavhidhiyo mazita ezita kuLinux. Chinyorwa icho chiri kutokohwina budiriro pane mamwe mapuratifomu, mutambo wakatsaurirwa kutyaira simulation ine anoyevedza magiraidhi uye yakanaka danho rechokwadi maererano nekubata kwemota dzatinogona kutyaira, pakati padzo pane emazuva ano uye echinyakare mamodheru mune nyika yemakwikwi.
Vanoda mitambo yemavhidhiyo, yerudzi urwu rweemotorsport simulators, uye ayo ari pro Linux, atoziva kare kuti kubva nhasi, 28 March we2019, inogona kuitwa nemusoro wenyaya. Yekutanga zita reCodemaster rakatsaurirwa kuungana uye rakavakirwa panhaka yezvakateedzana payakatumidzwa zita remutyairi wekupedzisira Colin McRae. Iye zvino, nemakore mazhinji ekuvandudza uye nhau huru, iyo nyowani vhezheni yeDiRT 4 inosvika kuitira kuti vashandisi veLinux vanakirwe nayo ...
Feral Interactive, mushure mebasa uye nekumirira kune avo vateveri, apa nhasi sezuva rekuburitswa kwayo. Ichashandisa iyo Vulkan mifananidzo API, iyo ichaipa simba risingaenzanisike. Ehezve, vatambi vanofanirwa kuve nezvinodiwa zvishoma zvinopfuura neUbuntu 18.04 kana zvichikwira (zvinoshanda pakutsigira mamwe ma distros, asi kwete zviri pamutemo naFeral), Intel Core i3-3 processor kana AMD FX kana yepamusoro 2GB NVDIA / AMD GPU ye mifananidzo kana zvirinani (GeForce 680 kana Radeon R9 285), 4GB ye RAM, uye 39GB yekuchengetedza kwemahara pane yedu hard drive.
Para kuitora, unogona kuenda kune webhusaiti yepamutemo yezvose Feral Chitoro, kwauchachiwana senge mamwe madoko echidzidzo, mu Humble Store kana in chiutsi kubva kuValve, senguva dzose. Iwe sarudza kwekutenga ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » DiRT 4: Totenda Feral Inopindirana chiteshi cheLinux chabuda nhasi